Maxaa Xal u Ah Jubbaland? Jeesow Ayaa Ka Jawaabay | Xaqiiqonews
Maxaa Xal u Ah Jubbaland? Jeesow Ayaa Ka Jawaabay
Isaga oo la hadlaayey Telifishinka Shabeele Tv, Ayuu Jeesow sheegay in Axmed Madoobe uu ku yimid Jubbland waxa uu ku magacaabay “qaab qaldan”.
Jeesow ayaa tilmaamay in Axmed Madoobe Jubbland ku yimid qaab jabhadeyn, waxa uuna tusaale u soo qaatay taariikhda Axmed Madoobe isaga oo xusay doorkii Axmed Madoobe ka soo qaatay ururadii burburay ee Raaskambooni iyo Al-itixaad.
Xildhibaanka ayaa teegaaray go’aanka QM ee ku qaadaceen wax loogu yeeray heshiiskii Nayroobi, kaasi oo iskula heshiiyeen siyaasiyiin Isku beel ah.
“Seeraar ma Gaaljecel baa, Xiddig ma ogaadeen baa mise waa Habargidir mise waa Dir ha sheego” ayuu yiri Xil.Jeesow, oo sheegay in Xalka Jubbland uu ku jiro gacanta Df-ka, lana soo qaban doono Axmed Madoobe.